Icandelo elibalulekileyo leNdaba lokuBhala kunye neCopyediting
Enye yezinto zokuqala umfundi oqala kwiklasi ye-journalism ufunda malunga nesitayela soNxibelelwano oluDityanisiweyo okanye isitayela se-AP esifutshane. Isitayela se-AP yindlela echanekileyo yokubhala yonke into ukususela kumhla ukuya kwiitelesi zezitalato ukuya kwizikhundla zomsebenzi. Isitayela se-AP saqulunqwa kwaye sigcinwa yi -Associated Press , inkonzo yeendaba endala kunayo yonke yehlabathi.
Kutheni Ndifanele Ndifunde I-AP Style?
Isitayela se-AP sokufunda ngokuqinisekileyo asiyiyona nto ebonwabisayo okanye ebangelisayo yomsebenzi kwi-journalism, kodwa ukufumana isingatha kuyo kuyimfuneko.
Ngoba? Kungenxa yokuba isitayela se-AP yimiqathango yegolide yokupapashwa kweendaba. Isetyenziswe luluninzi lwamaphephandaba e-US Intatheli engakhange ikhathaze ukufunda ngisho neziseko zesitayela se-AP, ofumana umkhwa wokuthumela amabali azaliswe ngamaphutha e-AP, mhlawumbi uzakufumana ukugubungela ibhodi yonyango yokuthuthwa kwamanzi ixesha elide, elide.
Ndifunda njani i-AP Style?
Ukufunda isitayela se-AP kufuneka ufumane izandla zakho kwi-AP Stylebook. Ingathengwa kwiindawo ezininzi zokuthenga okanye kwi-intanethi. I-stylebook ikhathalogu ebanzi yokusetyenziswa kwesitayela esifanelekileyo kwaye inamazwi angamawaka angeniso. Ngaloo ndlela, kunokusongela umsebenzisi wokuqala.
Kodwa i-AP Stylebook yenzelwe ukuba isetyenziswe ngabanyathelisi nabahleli abasebenza kwixesha elimisiweyo, ngoko ngokuqhelekileyo, kulula ukuyisebenzisa.
Akukho ndawo ekuzama ukuyikhumbula nge-AP Stylebook. Into ebalulekileyo kukufumana umkhwa wokuwusebenzisa xa ubhala ibali leendaba ukuze uqinisekise ukuba inqaku lakho lilandela isitayela esifanelekileyo se-AP.
Xa usebenzisa ngakumbi le ncwadi, ngakumbi uya kuqalisa ukukhumbula ngeengongoma ezithile ze-AP. Ekugqibeleni, awuyi kubhekisela kwincwadi yesitayela phantse.
Ngakolunye uhlangothi, ungafumani i-cocky uze uphonsa i-AP yakho ye-Stylebook emva kokuba uyikhumbula ngeenqobo. Isitayela se-AP se-AP sisigxina, okanye ubuncinci bexesha elide lomsebenzi, ukulandelelana, kunye nabahleli bezobugcisa beemviwo ngamava eminyaka bafumanisa ukuba kufuneka bajonge njalo.
Enyanisweni, hambani nasiphi na igumbi leendaba, naphi na kwilizwe kwaye unokufumana i-AP Stylebook kuwo onke a desk. YiBhayibhile yokupapashwa kweendaba.
I-AP Stylebook nayo yincwadi ephezulu kakhulu yesetyenzisiweyo. Iquka amacandelo anzulu ngokubhekiselele kumthetho wokubhaliweyo , ukubhala kwoshishino , ezemidlalo, ulwaphulo-mthetho kunye nemibhobho - yonke imicimbi enoba yiphina intatheli enhle ifanele iqonde.
Ngokomzekelo, yintoni umehluko phakathi kokugqithisa kunye nokuphanga? Kukho umehluko omkhulu kunye nomlobi wepolisa we- novice owenza impazamo yokucinga ukuba yinto enye kwaye into efanayo iya kukhangela ngumbhali onzima.
Ngoko phambi kokuba ubhale ukuba i-mugger igubungela isikhwama semalikazi endala, khangela i-stylebook yakho.
Nazi ezinye zezona ndlela ezisisiseko ezisetyenziswayo kunye neziqhelekileyo ezisetyenziswayo. Kodwa khumbula, ezi zimelela ingqinqwana encinane yezinto ezise-AP Stylebook, ngoko ungasebenzisi leli phepha njengenxalenye yokufumana incwadi yakho yokubhala.
Elinye ukuya kweyisithoba ngokubanzi likhankanywe, ngelixa i-10 nangaphezulu zibhalwe njengeenombolo.
Umzekelo: Wathwala iincwadi ezintlanu kwiibhloko ezili-12.
Ipesenti zihlala zibonakaliswa njengezibalo, zilandelwa ligama "iipesenti."
Umzekelo: Intengo yegesi yaphakama ama-5 ekhulwini.
Amaxesha ahlala echazwa njengeenombolo.
Umzekelo: Uneminyaka emihlanu ubudala.
Ixabiso leDola lihlala libonakaliswa njengeenombolo, kwaye isayina "$" isetyenzisiweyo.
Umzekelo: i-$ 5, i-$ 15, i-$ 150, i-150,000, i-$ 15 yezigidi, i-$ 15 billion, i-$ 15.5 billion
Amanqaku afakelwe iidilesi. Iitrato, iAven, neBoulevard zifingqiwe xa zisetyenzisiwe ngeedithi ezilandisiweyo kodwa ngaphandle koko zichazwe. Umzila kunye neNdlela ayifumananga.
Umzekelo: Uhlala kwi-123 Main St. Indlu yakhe nge-234 Elm Road.
Imihla iboniswa njengeenombolo. Iinyanga zenyanga ka-Agasti ukuya kuFebruwari zifingqiweyo xa zisetyenzisiweyo kunye nemihla. Ngo-Matshi ukuya kuJulayi akaze agqityiwe. Iinyanga ezingenazo iintsuku azifinyezi. "Th" ayisebenzisi.
Umzekelo: Umhlangano u-Oktobha 15. Wazalwa ngoJulayi 12. Ndiyathanda imozulu ngoNovemba.
Izihloko zeJob ziqhelekileyo xa zivela phambi kwegama lomntu, kodwa i-lowercase emva kwegama.
Umzekelo: uMongameli George Bush. UGeorge Bush ungumongameli.
Ifilimu, iNcwadi & Iingoma zeeNgoma
Ngokuqhelekileyo, ezi zifakwe kwii-quotation marks. Musa ukusebenzisa amanqaku okucaphuna ngeencwadi zokubhekisa okanye amagama amaphephandaba okanye amaphephancwadi.
Umzekelo: Waqeshisa "Iimfazwe zeNkwenkwezi" kwiDVD. Wafunda "iMfazwe noxolo."
Injongo Yesihlomelo sokuQala
I-Quetzalcoatl - I-Pan-Mesoamerican i-Served Serpent uThixo
Indlela yokuvakalisa iNgxelo ngesiJamani
Ngaba Iintsana Ziya Ezulwini?
Iincwadi eziphezulu malunga nobudala bokukhanya
Ienkolelo zamaKatolika malunga noMariya
Uwuphi umehluko phakathi kwe-opera kunye ne-oratorio?
Ngaba ama-Atheist ayahlukana njani?
Ingcaciso efutshane kaKarl Marx
Amanani aseJapane - Funda Ukubala NgoJapan
Abadlali abamnyama kwiRace kunye ne-Oscars
Unobungozi obubi kakhulu behlabathi
IYunivesithi Yabantu-IYunivesithi Ye-Free-Free-Tuition
Dawn U bulala Izilwanyana